Ahịa na Cointop: 2 GUI na CLI ngwa iji nyochaa Cryptocurrencies | Site na Linux
Taa, anyị ga-abanye ọzọ n'ọhịa nke Wa DeFi. Maka nke ahụ, anyị ga-ekwu maka oru ngo abụọ na-atọ ụtọ ma baa uru nke free na-emeghe ngwa.
2 ngwa, otu n'ime Desktọpụ (GUI) na otu n’ime Ọnụ (CLI) na GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ kere maka ndi ahu nwere obi uto Wa DeFi, kpọmkwem ndị ahụ kwa ụbọchị ahia (ha na ahia) dị iche Ego maka azụmahịa. A na-akpọkwa ndị a "Ahịa na Cointop".
Ọ bara uru ịkọwapụta, ọkachasị maka ndị ahụ Linuxeros nwee mmasị ma ọ bụ nwee mmasị na ya Ego, na ọ bụrụ na, ọ bụghị na ị chọpụtaghị ma ọ bụ chọọ ịlaghachi iji nyochaa / kesara ụfọdụ n'ime akwụkwọ anyị ndị gara aga metụtara Wa DeFi, anyị ga-ahapụ ụfọdụ njikọ bara uru na ha n'okpuru:
"Na nke atọ a, na ugbu a akwụkwọ ikpeazụ, gbasara obere Wallets Cryptocurrency Wallets na Sistemụ arụmọrụ efu na imeghe dabere na GNU / Linux, anyị ga-ekwukarị banyere "Dash Core Wallet" Ma mgbe ahụ, gbasara ụfọdụ ndị ọzọ mara nke ọma ma jiri ọtụtụ. .”Dash Core obere akpa: Wụnye na iji Dash obere akpa na ndị ọzọ!
"N'ụzọ bụ isi, "Adamant" bụ ngwa izipu ozi ngwa ngwa na-emeghe na-adabere na teknụzụ blockchain, nke n'aka nke ya, na-arụ ọrụ dị ka obere akpa Crypto na Cryptocurrency Exchange System (Exchange)."
"DeFi bụ usoro teknụzụ na-emeghe emeghe nke na-ewere ọnọdụ na teknụzụ ngọngọ na nso nso a banyere ụwa ego, nke ahụ na-esikwa ike kwa ụbọchị n'ihi ịrị elu nke Cryptocurrencies, yana mkpa usoro ịkwụ ụgwọ dijitalụ na azụmahịa azụmaahịa nwere ntụkwasị obi, ngwa ngwa, nchebe na nzuzo."
1 Ahịa na Cointop: Cryptos si na Desktọpụ na Terminal
1.1 Gịnị bụ Ahịa?
1.1.2 Nbudata, nwụnye, jiri na nseta ihuenyo
1.2 Gịnị bụ Cointop?
1.2.2 Nbudata, nwụnye, jiri na nseta ihuenyo
Ahịa na Cointop: Cryptos si na Desktọpụ na Terminal
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa, obu:
"Ngwa nke na aru oru dika uzo nke ngwa ahia, ego na aru oru."
Ya mere, ọ nwere ihu ọma nwere njirimara na arụmọrụ ndị a, nke ga-enye onye ọ bụla ohere ileba anya na data ego dị mkpa, ị na-aga ahịa ma ghara ịhapụ ohere itinye ego:
Mfe mepụta ma soro otu pọtụfoliyo nke ihe ego (ebuka, ngwa ahịa na indices), akụ (ego) na akụ crypto (cryptocurrencies) iji lelee.
Ndakọrịta na Linux Smartphones (Librem5, PinePhone)
Mepee akara ngosi ọ bụla na Yahoo Finance iji nwetakwuo nkọwa.
Gbanwee ugboro mmelite nke ihe ndị ejikọtara na pọtụfoliyo emepụtara.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị iji kwado ọhụụ nke ọdịnaya.
Ahịa bụ ngwa oru ngo GNOME CIRCLEYa mere, ọ bụ na mbụ dị na Ọkpụkpọ ".AppImage". Ya mere, ụzọ ya nke Ibudata na nwụnye ọ ga-abụ na iwu a:
Mgbe nke ahụ mechara, ọ nwere ike na-adị mfe gburu via Ngwa ngwa ma hazie ya ihe iji gosi / wepu ya, site na mfe ma kwụ ọtọ elu menu.
Maka ozi ọzọ na Ahịa ị nwere ike ịga leta gị weebụsaịtị na GitHub.
Gịnị bụ Cointop?
Dị ka gọọmentị webụsaịtị na GitHub nke ngwa, obu:
"Ngwa ngwa onye ọrụ mmekọrịta (CLI) ngwa ngwa na nke dị nfe dị mfe maka nsuso cryptocurrencies."
Ya mere, ọ nwere ihu ọma nwere njirimara na arụmọrụ ndị a, nke na-akwado nlekota nke ahịa crypto kpamkpam n'ịntanetị na njedebe:
Ọ na-enye nsuso dị mfe na nlekota nke ọnụ ọgụgụ cryptocurrency na ezigbo oge.
Ọ nwere ihu ọchị htop sitere n'ike mmụọ nsọ yana igodo mkpirisi vim.
Nyere, "Cointop" Ọ bụ ihu ọma ederede, mgbe ebudatara ya na unzipped, naanị ya ga-egbu site na nchekwa (ụzọ) ebe ọ dị na iwu ndị a:
Emechaa, ị ga - ahụ nke gị CLI interface na-arụ ọrụ enweghị nsogbu ọ bụla.
Maka ozi ọzọ na "Cointop" ị nwere ike ịga leta gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ọzọ kpọmkwem ya ngalaba ederede.
Cheta na: N'okwu m ọmụmụ, ebe m Usoro njikwa eji, bu MilagrOS (Respin dabere na MX Linux) nke ikpeazu nkwụsi ike mbipute 1.6.5 Egbughị ya n'ihi nsogbu nke GLIBC_2.32 ọba akwụkwọ. Mgbe gburu, ọ tụbara ndị na-esonụ njehie gosiri n'okpuru, mgbe ya gara aga mbipute 1.5.4 ọ gbara ọsọ na enweghị nsogbu ọ bụla.
N'ikpeazụ, maka ndị na-eji GNOME na Desktọpụ Environment, nke nchịkọta akpọ Onyinye, nwere ike ịbụ ihe ọzọ magburu onwe ọzọ ka nyochaa ahịa crypto.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Markets y Cointop», 2 na-adọrọ mmasị ma baa ezigbo uru Desktop (GUI) na Terminal (CLI) ngwa kere maka ndi ahu nwere obi uto Wa DeFi, kpọmkwem ndị ahụ kwa ụbọchị ahia (ha na ahia) dị iche Ego site na azụmahịa; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ahịa na Cointop: 2 GUI na CLI ngwa iji nyochaa Cryptocurrencies